Danyarta Boosaaso oo dalbanaya in laga caawiyo adeegyada hoyga iyo cuntada (Dhegeyso) – Radio Daljir
Danyarta Boosaaso oo dalbanaya in laga caawiyo adeegyada hoyga iyo cuntada (Dhegeyso)
Diseembar 14, 2013 2:25 b 0
Boosaaso, December 14, 2013 – Baragkacayaasha kaamamka magaalada Boosaaso ee xaruunta gobolka Bari ayaa ka cabanaya adeegyo la?aan iyo nolol xumo la soo deristay qaar dadka degan kaamamka.
Kaamka Saylada oo ku yaala bariga Boosaaso waxaa ku jira boqolaal qoys oo soo baragkacay, waxay sheegeen in ay haysato nolol xumo iyo hoy la?aanta oo ugu biirtay beryahan dambe.
Xasan Faarax oo horjooge ka ah kaamka Saylada ee Boosaaso waxaa uu daljir u sheegay in cunto la?aan daran ay kaamka ka jirto, waxaa uu xusay inay kaamka joogaan qoysas danyar ah oo aan awoodin in ay helaan nolol maalmeedka.
Puntland, Hay?addaha gargaarka iyo beesha caalamka ayey ka codsadeen in lala soo gaaro wax uun ka mid ah adeegyada ay bixiyaan hay?addaha gargaarka ee Qaramada midoobey, si loo caawiyo loona soo kabo nolosha dadka degan kaamka.
Kaamka Saylada oo ka mid ah meelaha ay degan yihiin Baragkacayaasha ugu badan ee Boosaaso waxaa uu dhisan yahay mudo labbo sano ah, dadka ku nool intooda badan waa dad xoogsato ah oo suuqa u shaqo taga, halka kuwa kalena aysan awoodin in ay noloshooda maareeyaan.
Dhegeyso: – Cabdiraxmaan Axmed oo daljir ka tirsan ayaa waraystay hor-jooge Xasan Faarax
Prof. Gaas ?RW cusub waxaa hortaala howl adag waase nin leh aqoon iyo khibrad ku filan? (Dhegeysi)
Tirada dhimashada iyo dhaawaca dagaal beeleed ka socda shabeelaha hoose oo sii kordhaya